Kubva 2006, EPONT Jack inyanzvi yekugadzirisa mota midziyo (hydraulic jacks, injini crane) inogadzira.
Zvimwe Zvishandiso zvekusimudza
Isu tiri Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. --- EPONT,Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi matatu dzakaita seUSA,Germany,Japan,Spain,Italy,UK,Korea,Australia,Canada uye etc.Makasitoma edu anosanganisira akawanda Makasitoma eOEM anoshanda nechitima, mota, forklift nemichina yekuvaka, takatove nekubatana nemakambani anopfuura gumi ePamusoro 500 epasi rose semumwe wevanonyanya kutengesa vatengesi muChina.
1.Tine mitsara yekugadzira 4 uye mitsara yekugadzira kupisa kwekupisa, bhodhoro jack rimwe zuva tinogona kubudisa anenge 5000pcs, pamusoro pejoko repasi tinogona kubudisa 500pcs.
2.Kambani inovhara nzvimbo ye 17000 square metres, kambani inotora "Reputation based, quality first" bhizinesi uzivi, kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvishoma nezvishoma, yekugadza mukurumbira wakanaka muindasitiri, chiyero chebhizinesi chiri kukura. YIPENG tenda nekujoinha kwako, kuchave namangwana ririnani, tenda YIPENG, sarudza YIPENG, batana neYIPENG, tichakupa iyo yakanakisa sevhisi uye vimbiso.
3.Kambani ine CNC lathe, muchina wekugaya, muchina wekukuya, static load test, dynamic load tester, Rockwell hardness tester, YASKAWA robhoti welding, punching processing and test equipment, kurega kambani chigadzirwa chemhando nekuchengetedzwa kwakavimbika.Spacing maburi ezvikamu zvakakosha zvekambani - jack cylinder, kunyanya kutorwa kwelaser drilling muchina kuti ive nechokwadi chekuwana chokwadi chekumisikidza, gomba rekugumira, kuitira kuti mhando yechigadzirwa yave kusvetuka kwemhando.
4.Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi matatu dzakaita seUSA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada uye etc.Our macustomers anosanganisira vatengi veOEM vakawanda vanoita zvechitima, mota, forklift nemichina yekuvaka. ,takatove nekushandira pamwe neanodarika makambani gumi ePamusoro 500 epasi rose semumwe wevanopa makambani makuru ekukanda muChina.
Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. yakavambwa muna 2006. Iyo iri pakati peYangtze river delta economic belt city, Jiaxing, uko iri padyo neShanghai, Hangzhou, Ningbo, Suzhou city, nezvimwe, zviri nyore pakufambisa. . Iyo kambani muunganidzwa weakasiyana Injini Crane, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack inova muviri wakasarudzika bhizinesi rekutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye 17000 square metres, kambani inotora "Reputation based, quality first" bhizinesi uzivi, kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvishoma nezvishoma, yekugadza mukurumbira wakanaka muindasitiri, bhizinesi chiyero chiri kukura. YIPENG tenda nekujoinha kwako, kuchave namangwana ririnani, tenda YIPENG, sarudza YIPENG, batana neYIPENG, tichakupa iyo yakanakisa sevhisi uye vimbiso. Epont mechanical muunganidzwa weakasiyana Engine Crane, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack rinova bhizinesi rakasarudzika rekutsvaga, Budiriro, Kugadzira uye kutengesa.1. TINE ZVINHU ZVINHU ZVINHU: Tine chitupa chechikoro chepamutemo2. KUGADZIRA TEKNOLOGY: Kuenderera mberi nekutsvaga uye hunyanzvi3. KUGUTSIKANA KWECUSTOMER: Ipa chigadzirwa chinogutsa.
Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. yakavambwa muna 2006. Iyo iri pakati peYangtze river delta economic belt guta, Jiaxing, uko iri padyo neShanghai, Hangzhou, Ningbo, Suzhou guta, nezvimwe, izvo zviri nyore pakufambisa. Iyo kambani muunganidzwa weakasiyana Injini Crane, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack inova muviri wakasarudzika bhizinesi rekutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye 17000 square metres, kambani inotora "Reputation based, quality first" bhizinesi uzivi, kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvishoma nezvishoma, yekugadza mukurumbira wakanaka muindasitiri, bhizinesi chiyero chiri kukura. YIPENG tenda nekujoinha kwako, kuchave namangwana ririnani, tenda YIPENG, sarudza YIPENG, batana neYIPENG, tichakupa iyo yakanakisa sevhisi uye vimbiso. Epont mechanical muunganidzwa weakasiyana Engine Crane, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack rinova bhizinesi rakasarudzika rekutsvaga, Budiriro, Kugadzira uye kutengesa.1. TINE ZVINHU ZVINHU ZVINHU: Tine chitupa chechikoro chepamutemo2. KUGADZIRA TEKNOLOGY: Kuenderera mberi nekutsvaga uye hunyanzvi3. KUGUTSIKANA KWECUSTOMER: Ipa chigadzirwa chinogutsa.
Isu tinogara muZhejiang, China, kutanga kubva 2006, kutengesa kuSoutheast Asia (15.00%), Africa (15.00%), Mid East (10.00%), Eastern Europe (9.00%), North America (8.00%), South America (7.00%), Southern Europe (7.00%), Central America (6.00%), South Asia (6.00%), Northern Europe (5.00%), Domestic Market (5.00%), Eastern Asia (3.00%), Western Europe ( 3.00%), Oceania (00.00%). Kune vanhu vanenge 51-100 muhofisi yedu.
Hydraulic Bottle Jack,Hydraulic Floor Jack,Injini Crane,Chigero Jack,Shop Press
Epont yakapfuura ISO / TS16949: 2009, ISO9001: 2015 quality management system certification, yakanyatsoita hurongwa hwekutonga kwemhando, yakapfuura chitupa chekuchengetedzwa kwemamiriro ekunze, uye majeki akapfuura CE, GS.& TUV chitupa.
Mitemo Yekutumira Inogamuchirwa: FOB;
Rudzi Rwakagamuchirwa Rwokubhadhara: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;